Password ​ထည့်​ရ​ခြင်း​နှင့် Download ​ဖိုင်​နာ​မည်​အား ​နာ​မည်​မှန်​မ​ပေး​ခြင်း​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Password ​ထည့်​ရ​ခြင်း​နှင့် Download ​ဖိုင်​နာ​မည်​အား ​နာ​မည်​မှန်​မ​ပေး​ခြင်း​နှင့်​ပတ်​သက်​၍
​ကဲ ​ဒီ​ကိ​စ္စ​ကို​ပြော​ရ​အောင်​ဗျာ. ​ကျွန်​တော် ​ဒီ​အ​ကြောင်း​ကို ​ပြော​တယ်. ​ပို့စ်​ကို​လည်း ​ထိပ်​ဆုံး​မှာ ​တင်​ထား​ပေး​တယ်. Download ​လုပ်​မည့်​သူ​များ ​မ​ဖြစ်​မ​နေ​ဖတ်​ပေး​ပါ ​ဆို​တဲ့​ခေါင်း​စဉ်​ကို ​မ​မြင်​ကြ​တာ​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​လည်း ​မ​တတ်​နိုင်​ပါ​ဘူး။ ​ကျွန်​တော့်​ဖက်​က ​အဲ့​လို password ​မ​ခံ​ဘဲ (​သို့) software ​နာ​မည်​နှင့် version ​ကို​သာ ​ထည့်​ထည့်​ပြီး ​တင်​နေ​ရင် ​အ​ခု mediafire account ​နှင့်​တင်​ထား​သ​မျှ ​ဖိုင်​များ​ကို ​ဖျက်​ပစ်​ယုံ​တင်​မ​က​ဘူး။ ​အ​ကောင့်​ကို​ပါ ​ပိတ်​ပစ်​တဲ့​အ​ထိ ​ဒု​တိ​ယ​အ​ကြိမ် ​ဖြစ်​လာ​ဦး​မှာ​ပါ။ ​အဲ့​လို ​ဖြစ်​လာ​မယ်​ဆို​တာ​ကို​လည်း ​ကြို​သိ​လို့ ​ပို့စ်​တင်​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ကို ​ဘာ​မှ​မ​ဆိုင်​ဘူး​ပြော​တဲ့​သူ​က​ပြော၊ ​အ​ခု​ဆို​ရင် ​အ​ထာ​ကိုင်​တယ် ​လို့​ဆို​တဲ့​သူ​က​ဆို​နဲ့ ​အ​မျိုး​မျိုး​ပြော​ကြ​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော့် ​မေးလ်​လိပ်​စာ​ဟာ ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ password ​ပါ​ပဲ။
​လျှို့​ဝှက်​နံ​ပါတ် ​တောင်း​သ​မျှ​ကို >>>>> konyinaymin@gmail.com <<<<<<
​ရှာ​တဲ့​သူ​က ​ရှာ​ပေး​ပြီး virus ​ဟုတ်​မ​ဟုတ် ​သေ​ချာ​စစ်​ပြီး​မှ ​အ​ပင်​ပန်း​ခံ ​တင်​ပေး​တာ​တောင်​မှ ​ဒီ password ​လေး ​ရိုက်​ထည့်​ဖို့​တောင်​မှ ​ဝန်​လေး​နေ​ရင်​လည်း ​မ​ဒေါင်း​တာ​က ​ပို​ကောင်း​ပါ​တယ်။ ​ဒါ​ကျွန်​တော် ​ပြတ်​ပြတ်​ပြော​တာ​ပါ။ ​ကျွန်​တော်​က​တော့ ​ကျွန်​တော်​တင်​တဲ့​ဖိုင် ​အ​ဖျက်​မ​ခံ​ရ​အောင် ​နည်း​အ​မျိုး​မျိုး​နဲ့ cover ​လုပ်​ကြည့်​မှာ​ပါ​ပဲ။ ​လို​ချင်​တာ​ပဲ ​သိ​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး။ ​အဲ့​ဆိုက်​မှာ ​ဘာ​တွေ ​ပြု​ပြင်​ထား​သ​လဲ။ ​လက်​ရှိ​လက်​တ​လော​အ​ခြေ​အ​နေ ​ဘယ်​လို​ရှိ​သ​လဲ ​နည်း​နည်း​ပါး​ပါး ​တီး​ခေါင်း​ကြည့်​ပါ​ဦး။ www.mediafire.com ​ဘာ​တွေ​ပြောင်း​လဲ​နေ​ပြီ​လဲ။ ​ဘာ​လို့ ​တင်​ထား​သ​မျှ ​လင့်​တွေ(​တစ်​ခြား​သူ​တွေ​တင်​ထား​သ​မျှေ​တွ​ပါ ​အ​ပါ​အ​ဝင်) ​အ​ဖျက်​ခံ​ရ​တာ​တွေ​ဟာ ​ဘာ​လို့​လဲ။ ​သူ့​ဆိုက်​မှာ ​စည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​တွေ​ဘာ​တွေ ​ထပ်​တိုး​ထား​သ​လဲ။ www.ifile.it ​က​ကော ​ဘာ​ဖြစ်​လို့ ​အဲ့​နာ​မည်​မ​ရှိ​တော့​တာ​လဲ။ ​အဲ့​နာ​မည်​အ​စား ​နောက်​ထပ် ​နာ​မည်​အ​သစ်​တစ်​ခု ​ကို​ထပ်​ဝယ်​ပြီး​တော့ free user ​များ​တင်​ထား​တာ​တွေ ​မှန်​သ​မျှ​ကို ​ဖျက်​ပစ်​ပြီး​တော့ premium member ​တွေ ​တင်​ထား​တာ​တွေ​ကို​သာ backup ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​လုပ်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ ​ဒီ​ဒု​က္ခ​တွေ​ကို ​သိ​ပါ​သ​လား။ ​ဘာ​တွေ​ဖြစ်​နေ​သ​လဲ​ကော ​လိုက်​ဖတ်​ကြည့်​ဖူး​လား။ ​ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ်​မေး​ပေး​ပါ။ ​ကျွန်​တော့်​ကို​ချည်း​အ​ပစ်​တင်​နေ​မယ့်​အ​စား ​အင်​တာ​နက်​မှာ ​ဘာ​တွေ​ပြောင်း​လဲ​နေ​သ​လဲ ​ဆို​တာ​ကို ​ကိုယ်​ကိုယ်​တိုင် ​သွား​ဖတ်​ကြည့်​တာ ​ပို​ကောင်း​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော်​ဒီ​လောက်​ပဲ ​ပြော​ချင်​ပါ​တယ်​ဗျာ။ ​စ​ကား​ပြော​တာ ​နည်း​နည်း​ရိုင်း​သ​လို ​ဖြစ်​သွား​ရင်​တော့ ​တောင်း​ပန်​ပါ​တယ်​လို့​ပဲ ​ပြော​ပါ​ရ​စေ။ ​တစ်​ခု​တည်း​ပဲ​ပြော​ချင်​ပါ​တယ်။ ၃ ​နှစ်​တိုင်​တိုင် ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ mediafire account ​နဲ့ ifile account ​နှစ်​ခု​စ​လုံး ​အ​ပြောင်း​အ​လဲ​တွေ​ကြောင့် ​အ​ဖျက်​ခံ​လိုက်​ရ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​အ​တွက် ​အား​လုံး​ကို ​ပြန်​တင်​ပေး​ရ​မယ့် ​အ​ခြေ​အ​နေ​အ​ထိ ​ရှိ​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော် ​စဉ်း​စား​ထား​ပါ​တယ်။ version ​အ​ဟောင်း​တွေ​ကို ​ပြန်​ပြီး link ​တွေ​ပြင်​နေ​မယ့်​အ​စား version ​အ​သစ်​တွေ​ကို ​တင်​ပေး​သွား​ဖို့​ပါ​ပဲ။ ​ပြီး​တော့ ​ကို​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို ​တတ်​နိုင်​ရင် premium account ​နဲ့ ​တင်​ဖို့​အ​ထိ​ကို ​ဆုံး​ဖြတ်​ထား​ပါ​တယ်။ ​ကျွန်​တော့်​ဖက်​က ​လုပ်​သင့်​လုပ်​ထိုက်​တယ်​ထင်​ရင် ​လုပ်​ပေး​သွား​မှာ​ပါ​ပဲ။ ​ပြောင်း​လဲ​မှု့​ကြောင့် ​ဖိုင်​တင်​တဲ့​အ​ခါ​မှာ​လည်း ​သူ့​ပြောင်း​လဲ​တာ​ကို ​လိုက်​ပြီး ​ဘာ့​ကြောင့်​လဲ​ဆို​တဲ့​အ​ဖြေ​ကို​ရှာ​ပြီး ​နောက်​ထပ်​မ​ဖြစ်​အောင် password ​နဲ့​တင်​ရ​ပါ​တယ်. ​မ​ဟုတ်​ရင် ​တင်​ထား​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို​ဒေါင်း​ပြီး software ​ဟုတ်​မ​ဟုတ် ​စစ်​မှာ​ပါ။ ​များ​သော​အား​ဖြင့် ​အဲ့​ဖိုင်​ကို ​တင်​ထား​တာ ​ဘယ်​ဆိုက်​မှာ​ဆို​တာ ​သူ​တို့​တန်း​သိ​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​တော့ ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​သူ​တို့​စမ်း​မှာ​က ​ဆိုက်​ရဲ့​လိပ်​စာ​ပါ။ ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​ဆိုက်​လိပ်​စာ​မ​ထည့်​ဘဲ ​ကျွန်​တော့်​ရဲ့ ​မေးလ်​လိပ်​စာ​ကို ​ထည့်​လိုက်​တာ​ပါ။ ​ဒါ​လေး​တောင် ​မ​ရိုက်​နိုင်​ရင်​လည်း ​ကျွန်​တော်​လည်း ​မ​တတ်​နိုင်​ပါ​ဘူး။ password ​က​တော့ ​ခံ​ထား​မြဲ​ခံ​ထား​ရ​မှာ​ပါ​ပဲ။ ​ဘာ​လို့​လဲ​ဆို​တာ Download ​လုပ်​တဲ့​ဖိုင်​ထဲ​မှာ ​မြန်​မာ​လို ​ရေး​ပေး​ထား​ပါ​တယ်။ ​ကို​လို​ချင်​တဲ့​ဖိုင်​ရ​ရင်​ပြီး​ရော ​ဖတ်​ပေး​ပါ​ဆို​တဲ့​ဖိုင်​က ​မ​လို​ပါ​ဘူး​ကွာ​လို့ ​ဆို​ပြီး ​ဖျက်​ပစ်​ရင်​တော့ ​ဘာ​ဖြစ်​လို့ password ​ခံ​ထား​သ​လဲ​ဆို​တာ​ကို ​သိ​မှာ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး။ ​အ​ခြေ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​ချိန်​အ​ခါ​ဆို​တာ ​ရှိ​ပါ​တယ်။
​ကျွန်​တော်​က​ဗျာ​လေး ​တစ်​ပုဒ် ​ရေး​ပေး​ပါ့​မယ်။
​အဲ့ ​အ​ဓိ​ပ္နါယ်​ကို ​ဘာ​ကို​ဆို​လို​တယ်​ဆို​တာ​က​တော့ ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို ​စဉ်း​စား​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်။ ​အဲ့​က​ဗျာ​ထဲ​က​လို​ပါ​ပဲ။ ​ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယ် ​အ​ရင်​တည့်​မတ်​ပါ။ ​ဂ​ဏာန်း​လို​လည်း ​ကန့်​လန့်​မ​သွား​ပါ​နဲ့၊ ​ပုတ်​သင်​ညို​လို​လည်း ​ဘာ​ပြော​ပြော ​အင်း​ချည်း​ပဲ ​ခေါင်း​မ​ညိမ့်​ပါ​နဲ့၊ ​ဝါး​ပင်​လို​လည်း ​ဟို​လူ​က​ပြော​ရင် ​ဟို​လူ့​ဖက်​ကို​လိုက်​လိုက်၊ ​ဒီ​လူ​ပြော​ရင်​လည်း ​ဒီ​ဖက်​ကို​ယိမ်း​လိုက် ​မ​လုပ်​မိ​ပါ​စေ​နဲ့၊ ​လိပ်​တစ်​ကောင်​လို​လည်း ​ကို့​ဖက်​ကို​ချည်း ​မ​ယက်​မိ​ပါ​စေ​နဲ့၊ ​နွား​သိုး​တစ်​ကောင်​ကို​လည်း ​တ​ဇွတ်​ထိုး ​ဘာ​မှ​မ​စဉ်း​စား​ဘဲ ​ဇွတ်​မ​မိုက်​ပါ​နဲ့၊ ​မြေ​ခွေး​လို​လဲ ​ဒီ​ဟာ​ကို ​ရ​မှ​ဖြစ်​မယ်​ဆို​ပြီး ​စဉ်း​စား​ဥာဏ်​နှင့်​ချင့်​ချိန်​မှု့​မ​ရှိ​ဘဲ​နဲ့ ​သေ​သေ၊ ​ရှင်​ရှင် ​ဆို​ပြီး ​မိုက်​လုံး ​မ​ကြီး​မိ​ပါ​စေ​နဲ့ ​ပြော​ချင်​တာ​က​တော့ ​အဲ့​ခြောက်​မျိုး​ထဲ​မှာ ​ပါ​နေ​တဲ့​သူ​သည် ​ကြီး​တဲ့​သူ ​တစ်​နည်း​အား​ဖြင့် ​အ​များ​ကို ​ဦး​ဆောင်​နိုင်​တဲ့​သူ ​မ​ဖြစ်​ထိုက်​တဲ့​သူ​တွေ​ပါ​ပဲ။ ​အဲ့​ဒီ့​အ​ထဲ​မှာ ​ကို​မ​ပါ​မိ​ပါ​စေ​နဲ့​လို့ ​ကျွန်​တော် ​ဆု​တောင်း​လိုက်​ပါ​တယ်။
​က​ဗျာ​ရဲ့ ​ဆို​လို​ရင်း​ကို ​သ​ဘော​ပေါက်​လိမ့်​မယ်​လို့ ​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်။
heartless ps July 21, 2012 at 4:16 AM
​ဟုတ်​တယ် ... ​တော်​တော်​များ​များ​က ​ဘာ​လို့ ​ပတ်စ်​ဝေါ့​ထည့်​တယ်​မ​သိ​ကြ​ဘူး.. ​ကျ​နော်​တို့​လည်း ​ဒေါင်း​ကြ​တာ​ပါ​ပဲ.. ​ဒီ​လို​ပဲ.. ​မ​ရ​တာ​တွေ ​ဖိုင်​ဖျက်​ခံ​ရ​တာ​တွေ​နဲ့​ကြုံ​တဲ့​အ​ခါ ​ကိုယ့်​ကော်​နက်​ရှင်​နဲ့ ​ဒီ Webpage ​တစ်​ခု​ပွင့်​အောင်​စောင့်​ထား​ရ​တဲ့​အ​ချိန်​တွေ​ကို ​နှေ​မြာ​မိ​တာ​ပဲ.. ​အဲ​ဒါ​ကြောင့် ​အ​ဖျက်​မ​ခံ​ရ​အောင်​တင်​ပေး​တာ​ကို ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပြီး​တော့ password ​လေး​ကို​တော့ ​ရိုက်​သင့်​တယ်​ထင်​တာ​ပဲ....
nyizar956 July 21, 2012 at 11:17 PM
​ကျွန်​တော်​တို့​လို ​အ​ဝေး​ရောက်​နေ​သူ​များ​အ​တွက် ​ဒီ​လို​ဆိုဒ်​များ​ကို​ဘဲ ​အား​ကိုး​နေ​ရ​ပါ​တယ်။ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ကို​ယုံ​ကြည်​ပါ​တယ်။ ​လို​အပ်​နေ​တဲ့​အ​ချိန်​မှာ ​ဘယ်​လို​မျိုး​ဘဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​လိုက်​ဆောင်​ရွက်​ပြီး ​ဒေါင်း​တာ​ဘဲ။ ​အ​များ​အ​ကျိုး​ဆောင်​ရွက်​ပေး​နေ​တဲ့​အ​တွက် ​အ​ထူး​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်။
San San Nwe July 22, 2012 at 6:33 PM
don't angry fri,more flexible, more mercy . go on u r way
San San Nwe July 22, 2012 at 6:42 PM
pls show more mercy more kindly for all
thx all u do
​အ​လင်း​အိမ် July 23, 2012 at 7:07 PM
​ပ​ညာ​ကို ​ချီး​ပေါ​သေး​ပေါ ​အ​လ​ကား​ရ​တယ်​လို့ ​ထင်​တဲ့​လူ​တွေ​အ​တွက် ​စိတ်​အ​နှောင့်​အ​ယှက်​မ​ဖြစ်​ပါ​နဲ့..​ညီ​လေး
​အ​ကို​တို့​က ​အ​မြဲ​တမ်း ​ညီ​လေး​ကို ​အား​ပေး​အား​မြှောက်​လျက်​ပါ.
​လော​က​မှာ ​ပ​ညာ​အ​လှူ​လောက် ​သန့်​ရှင်း​တဲ့ ​အ​လှူ​ဆို​တာ ​မ​ရှိ​ပါ​ဘူး​ကွာ..
​ကျမ်း​စာ​မှာ ​ဒီ​လို ​ဆို​ထား​တယ်..​ညီ​လေး
​ပ​ညာ​သည် ​ပ​ညာ​ရှိ​သော​သူ​၏ ​မျက်​နှာ​ကို ​ထွန်း​လင်း​စေ​တတ်​၏။
​ထို​သူ​၏ ​မျက်​နှာ​သည် ​အ​ထူး​သ​ဖြင့် ​ရဲ​ရင့်​သော​အ​ဆင်း​ရှိ​တတ်​၏။
​ပ​ညာ​အ​တွက် ​အ​ချိန်​ပေး​ပြီး ​အ​နစ်​နာ​ခံ​တတ်​တဲ့ ​ညီ​လေး​ကို ​ဘု​ရား​ရှင်​ကောင်း​ကြီး​ပေး​ပါ​စေ...
Robben.htoon August 2, 2012 at 1:23 PM
​မ​သိ​တဲ့ ​ကောင်​တွေ​ကို ​ရှင်း​ပြ​နေ​ပါ​နှဲ့​ဗျာ. ​အ​လ​ကား​လည်း​ရ​သေး ​သွား​ဖြဲ​ကြည့် ​အ​မြီး​လှန်​ကြည့်​နဲ့..
Zaw Aung August 23, 2012 at 2:59 PM
​အ​ကို ​ကျွန်​တော် ​လက်​တော့ password ​မေ့​သွား​လို့​ဖွင့်​လို့​မ​ရ​ဘူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး။​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ​ဆို​တာ။
Zaw Aung August 23, 2012 at 3:02 PM
​အ​ကို ​ကျွန်​တော့် ​လက်​တော့ ​ပက်​စ​ဝက်​မေ့​သွား​လို့​ဖွင့်​မ​ရ​တော့​ဖြစ်​နေ​တယ်။​ကူ​ညီ​ပါ​အုံး
Motherboard ​တိုင်း​ကို ​ဝယ်​သင့်​သ​လား
Password ​ထည့်​ရ​ခြင်း​နှင့် Download ​ဖိုင်​နာ​မည...